Chloë Grace Moretz – Myanmar Subtitles
ဘယ်လိုဇာတ်ကားလဲဆိုတာ မပြောခင် အော်စကာ 5ခုတိတိ ရထားတဲ့ ဇာတ်ကားဆိုတာ အရင်ပြောပါရစေ အော်စကာဆုရှင် မင်းသားကြီး Ben Kingsley နဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင်ဘဝကနေ လူငယ်သရုပ်ဆောင်ဘဝအထိ ဆုပေါင်းများစွာသိမ်းပိုက်ရင်း အောင်မြင်လာတဲ့ မင်းသာလေး Asa Butterfield တို့ကို အတွဲညီစွာတွေ့မြင်ရမှာပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့1930ကာလ ပဲရစ်မှာ ဟူဂိုဆိုတဲ့ မိဘမဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်က ရထားဘူတာရဲ့နံရံနောက်မှာ နေထိုင်ပြီး ဆုံးသွားတဲ့သူ့အဖေနဲ့ သူ့ဦးလေးဆီက ပစ္စည်းအတိုအစလေးတွေကိုသုံးပြီး ဘူတာကနာရီကြီးကို ရပ်မသွားခင်ပြုပြင်နေသူလေးပါ သူ့အဖေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ နောက်ဆုံးကျန်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းလေးက automaton ဆိုတဲ့ လူပုံစက်ရုပ်လေးပါပဲ ဒီစက်ရုပ်လေးက အထူးသော့မပါဘဲ အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါဘူး ဒီတော့ သော့ကိုရှာဖို့ကြိုးစားရင်း ရထားဘူတာက ဈေးဆိုင်ရှင်ကြီး ဂျော့နဲ့ သူ့သမီးလေးတိုနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် ဒီသားအဖက ဟူဂိုရဲ့အဖေနဲ့ မထင်မှတ်ဘဲ အဆက်အသွယ်ရှိနေတာကို ဟူဂိုသိသွားတဲ့အခါ...... File size: 1.4gb,600mb Link type: soliddrive,googledrive,openload
ငယ်ရွယ်တဲ့ကောင်မလေး Mia Hallရဲ့ဘဝက သူမကားတိုက်ခံလို့ ကိုမာဖြစ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ချက်ချင်းကိုပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ် ခန္ဓာကိုယ်အပြင်မှာ လွင့်မြောနေတဲ့အချိန်အတွင်း သူမစိတ်ကူးထားတဲ့ဘဝနဲ့ တခြားစီဖြစ်နေတဲ့ဘဝကြီးမှာ ဆက်လက်အသက်ရှင်ဖို့ သူမဆုံးဖြတ်ရတော့မှာပါ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်သာမှန်ကန်ခဲ့ရင်တော့ အားလုံးကသူမအပိုင်ဖြစ်လာမှာပါ။ Translator: Waihan Lin Htin
ကျွန်တော်နဲ့ နွေရာသီ ရက် ငါးရာ . ဒီကားရဲ့ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကို လူတွေ နားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ အတော်ခက်ပါတယ်။ရက်စွဲတွေဟာ ရှေ့ရောက်လိုက် နောက်ရောက်လိုက်ဖြစ်ပြီး ဇာတ်လမ်းသွားမှာ စီးမျောနိုင်ဖို့ တော်တော် သည်းခံ အာရုံစိုက်ရဖို့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်သဘောကျမိတဲ့ IMDB က plot summary လေးနဲ့ပဲ စချင်ပါတယ်။ 'An offbeat romantic comedy aboutawoman who doesn't believe true love exists, and the young man who falls for her' အချစ်စစ် ဆိုတာ တည်ရှိတယ်လို့ မယုံကြည်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ သူ့ကိုမှ ကြွေသွားတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်အကြောင်း တမူထူးတဲ့ အချစ်ဟာသဇာတ်လမ်း.။ . Tom ဆိုတဲ့ ကောင်လေးဟာ ဗိသုကာပညာသင်ယူခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်း သူ အသက်မွေးနေတာ ပိုစ့်ကဒ်တွေမှာ စာတန်းလေးတွေ ရေးတဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ်ပါ။ ( သူ့ကို ...
မကြာခင်2ထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ အဟောင်းလေးပြန်ကြည့်ကြတာပေ့ါ ဒီကားထဲမှာ မင်းသားကြီး ဒန်ဇဲဝါရှင်တန်က ဆန်းကြယ်တဲ့သူ့ရဲ့အတိတ်ကို မေ့ပစ်ပြီး ဘဝအသစ်စလို့ရမယ်လို့ တွေးထားသူတစ်ယောက်ပါ ဒါပေမဲ့ အစွန်းရောက်ရုရှားဂိုဏ်းတစ်ခုက ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ မိန်းမလေးငယ်တစ်ဦးနဲ့တွေ့ပြီး သူ့အတွေးကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်ရပါတော့တယ် ဒီမိန်းမငယ်လေးကို မကူညီဘဲမနေနိုင်တဲ့ တရားမျှတသူကြီးရဲ့အကြောင်းကို အက်ရှင်ခန်းအပြည့်နဲ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် IMDb: 7.2 Director: Antoine Fuqua Stars: Denzel Washington, Marton Csokas, Chloë Grace Moretz Genre: Action, Crime, Thriller File size: 900mb Link type: soliddrive,openload Translator: Waihan Lin Htin